Wako Guest Blogger Yekutarisa | Martech Zone
SEO makambani anoenderera mberi kuyedza nekutsvagisa injini dzekutsvaga ... hazvingomire. Matt Cutts weGoogle akanyora chinyorwa chikuru, Kuora uye kudonha kwevaenzi blogging yeSEO inosanganisira vhidhiyo pachigaro chake pane blogging yevaeni uye Matt anopa izvi seyake yepasi mutsara:
Ini ndinongoda kujekesa kuti boka remhando yepasi-yepamusoro kana spam nzvimbo dzakanamatira ku "muenzi blogging" seyvo yekubatanidza-kuvaka zano, uye isu tinoona yakawanda yakawanda spammy kuyedza kuita kwevaenzi blogging. Nekuda kweizvozvo, ini ndinokurudzira kusahadzika (kana kungwarira) kana mumwe munhu akasvika ndokukupa iwe muenzi blog chinyorwa.
Isu munguva pfupi yapfuura kubuda muenzi blogger pano pa Martech Zone. Munyori akauya kwatiri achiti aida kuti awedzere kuburitswa muindasitiri yekutengesa uye akatarisira kutinyorera zvimwe zvakadzama zvinyorwa. Isu takamupa mukana uye iye akanyora tsamba yekutanga.
Ndakanga ndisina chokwadi. Iyo posvo yaive iine mashoma maratidziro mukati mezviri mukati ... mashoma aive akajairika asi imwe yaive yakanangana uye ndaive neshungu. Isu tanga tichitoisa zvinongedzo zvisina kufanira kune zvinobuda zvirimo, asi ini zvakadaro handina kukwanisa kuzunungusa chokwadi chekuti yanga isiri yakanangwa zvirimo… ine yakanangwa zvakanyanya ma link. Zvimwezve zvinyorwa zviviri kubva kumunyori uye ini ndaifanira kutanga kuita kumwe kuongorora.
Ndakaongorora rake Twitter, Facebook nhoroondo, Google+ purofesa uye zvimwe zvinyorwa pawebhu. Imwe neimwe yaive yakati rebei… pasina hurukuro dzega, pasina shamwari, uye mimwe mibvunzo nezvekwaakabva kana kugara iye zvino. Iye anoita kunge munhu wekunyepedzera kunyangwe iye akaunganidza zvinyorwa online. Ehezve, ini handina kana chokwadi kana ari iye chaiwo chisazitasingwi.
Huswa hwekupedzisira ndewekuti ini ndakamukumbira kopi yerezinesi rake rekutyaira. Akanyora uye akataura kuti aisagadzikana kupa ruzivo rwakavanzika rwakawanda. Handina kumbobvunza ruzivo rwepachivande… angadai akavhara kero yekumba uye chero data remunhu. Ini ndaingoda humbowo hwekuzivikanwa. Naizvozvo, ndakabvisa zvese zvinongedzo kubva pane zvaakatumira uye ndikachinja magwaro ake ekupinda.
Saka… kubva pano kuenda kunze, heino chinyorwa changu:
Kuzivikanwa kwakarongeka - iyi blog isimba rangu repamhepo uye ndinoda kuchengetedza kuburitswa, kuremekedzwa uye mhando kuitira kuti ndichengete uye ndikure zvinotevera. Ini handisi kuzozviisa panjodzi kune imwe backlinker.
Mabasa Anopa - vese vanyori vedu vachatanga nekuva vabatsiri… zvichireva kuti vanokwanisa kunyora zvemukati asi vasingakwanise kuzvishambadza vega. Tichaongorora nekutsikisa zvinyorwa zvavo kusvika tagadzikana vanzwisisa zvavari kuita.
Kuzarura Zvakakwana - kana paine chero hukama hwakabhadharwa pakati pedu, iye zvemukati munyori, uye zviwanikwa zvinopihwa mukati meiyo posvo - izvo hukama hunoburitswa muverengi. Hatina basa nekupa zvirimo nezvevatsigiri vedu kana zvigadzirwa nemasevhisi atakabatana nawo… asi vateereri vedu vanofanira kuziva kuti pane hukama ipapo.
Nofollow - zvese zvinongedzo zvichave zvisina kuvhurwa pane zvevaeni zvinyorwa. Hapana anosara. Chinangwa chako chinofanirwa kunge chiri chekusvika nekuwana mukana nevateereri vedu uye nekutevera - kwete backlinking yeSEO. Ngatigarei zvedu zvakakosha.
Verified Mifananidzo - chero zvigadzirwa zvinoonekwa zvinopihwa marezenisi. Kana muyenzi blogger wedu asina zviwanikwa, isu tinoshandisa yedu stock stock uye vhidhiyo zviwanikwa. Ini handisi kuzotora mari yekubiridzira kubva kune stock stock sevhisi nekuti muenzi blogger akabata mufananidzo kubva kuGoogle chifananidzo chekutsvaga.
Yakasiyana Yemukati - hatibatanidze zvemukati kubva kune zvimwe zviwanikwa. Zvese zvatinonyora zvakasarudzika. Kunyangwe patinogovana infographics, inoperekedzwa nechinyorwa chakasarudzika kune vateereri vedu.
Ndeapi mamwe matanho aunotora kuti uve nechokwadi chekuti chirongwa chako chevaenzi chiri kublogi rako chiri kubatsira uye kwete kukuvadza yako mukurumbira pamhepo uye chiremera nekutsvaga uye nemagariro?
Tags: backlink zanoBacklinksnyeperamuenzi bloggerseo
Basa rakakura Douglas, iri rakakura uye rakasarudzika posvo nezve izvo zvinoitwa nemabloggi aya nemuenzi blogging. Ini handizive kuti nei usina kutarisa kune aya marongero usati wapa kunyora tsamba yevaeni pane yako blog. Isu tese tinoziva kuti aya marongero anosungirwa uye isu tese tinofanirwa kutevedzera tisati tabvumira chero munhu kunyora blog yevaeni pane yako blog.